बामदेव गौतम, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७८ सालको सुर्योदय बालुवाटारबाट हेर्न नदिने – Khabar Patrika Np
बामदेव गौतम, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७८ सालको सुर्योदय बालुवाटारबाट हेर्न नदिने
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०४, २०७७ समय: २१:३४:५७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै वर्ष पटक पटक बामदेव गौतमलाई अप्ठ्यारो पार्ने कदम चाले । उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन पनि अलमल गरे । गौतमकै भूमिकाले ओलीले दुई पटक सत्ता संकट टार्न सके । तर, पटक पटक आफूलाई असजिलोमा पार्ने कदम ओलीबाट भएको बुझाई गौतमको रह्यो ।
ओलीको कदमले कतिपय अवस्थामा बामदेव पद लोलुप पनि देखिए । उनलाई भैंसेपाटीमा भेट्न जाने ओली पक्षीय प्रभावशाली नेताहरुलाई सिधै तथ्यांकसहित ओलीलाई पटक पटक साथ दिएको तर आफूलाई धोका मात्र मिलेको प्रस्तुत हुन्थे ।
प्रतिनिधि सभा विघटन अगावै ओलीको बामदेवलाई बेवास्ता गरी कदम चालेपछि उनले निकटस्थमाझ भनेका थिए, ‘ओलीलाई २०७८ सालको सूर्योदय बालुवाटारबाट हेर्न दिन्नँ ।’ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गौतम झन् आक्रोशित भएर ओलीविरुद्ध प्रस्तुत भए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि गौतम एकता अभियानमा लागिरहे । तर, उनले ओलीलाई सत्ताबाट हटेर कम्युनिस्ट एकताको मार्ग खोल्न भनिरहे । तर, ओलीले मानेनन् । उल्टै बामदेवसहित निर्वाचित पदाधिकारीलाई घुमाउरो तरिकाले कारबाही गरे । आफू र महासचिव इश्वर पोखरेलबाहेकको पदाधिकारी नरहने निर्णय गरे । त्यसपछि गौतमले ओलीसँगको एकता समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए ।
कम्युनिस्ट एकतामा लागिरहेपनि बामदेवले ओली कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने शर्त सारेका छन् । उनले केही समय अघि ओलीलाई यस वर्षभित्र सत्ताबाट हटाइछाड्ने अठोट लिएका थिए । अबको २८ दिनभित्र गौतमले बोलेको पूरा हुन्छ या हुँदैन ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । ओली सत्ता संकट टार्न अझै प्रयासरत छन् । तर, उनी घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् ।
बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी,ओलीलाई छिटो विदा गर्न चुक्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो विदा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राज्यका सबै अंग र साधनस्रोत कब्जा गर्ने अनि सद्याम हुसेन, पर्वेज मुसर्रफ र हुन सेन स्टाईलको चुनाव गराएर प्रधानमन्त्री ओली आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट पछि हट्ने छाँटकाँट नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत नेता भट्टराईले अब ओलीलाई छिटो विदा गर्न र लोकतन्त्र संविधानको रक्षा गर्न चुके आफूहरु कसैलाई पनि ईतिहासले माफ नगर्ने दाबी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्-“राज्यका सबै अंग र साधनश्रोत कब्जा गर्ने अनि सद्दाम हुसेन,पर्वेज मुसर्रफ,हुन सेन स्टाइलको चुनाव गराएर आफु चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछिहट्ने कुनै छॅाटकॅाट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो विदा गर्न र लोकतन्त्र/संविधानको रक्षा गर्न चुक्यौं भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन है!”
बामदेव छुट्टै दल खोल्ने तयारीमा फागनेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता बामदेव गौतम छुट्टै दल खोल्ने तयारीमा लागेका छन् । एमाले फुट्ने निश्चितप्रायः भएपछि उनी कुनैपनि समूहमा नलागी अलग समूह बनाएर बस्ने तयारीमा बसेका हुन् ।
गौतम सकभर फागुन २८ गते अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम सच्याउन लाग्ने गरी सक्रिय भएका छन् । ओलीले कदम सच्याएर पार्टी एक हुनसक्ने उनको बुझाई छ । अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका निर्वाचित पदाधिकारी नै खारेज गर्ने ओलीको कदम नसच्चिए एमाले फुट्ने गौतम पक्षको निष्कर्ष रहेको छ ।
नेकपा एकता अभियानको भेलाले ओलीको कदम नसच्चिए एमाले फुट्ने र त्यतिबेला कस्तो कदम चाल्नेबारे समेत छलफल गरी सुझाव दिएको छ । जसमा एक समूहले माधव नेपाल-झलनाथ खनालको समूहमा जोडिन भनेको छ । तर, अधिकांशले एकता अभियानलाई यथावत् राखेर छुट्टै ढंगले बढ्न सम्झाएको छ ।
गौतमले पनि कुनै पनि समूहमा नलागी आफ्नो छुट्टै समूहलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेका छन् । त्यो अभियानमा सिमित हुने या दलका रुपमा समेत दर्ता हुनसक्ने बुझिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल-खनाल समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा गौतम समूहका केही नेताहरु पनि पुगेका छन् । उनीहरु अवस्थालाई विश्लेषण गरी कदम चाल्ने गरी गौतमलाई सुझाव दिने गरी तयारीमा छन् ।